Uma ungumsebenzisi osebenzayo we yokuxhumana "VKontakte", cishe kufanele kuthakazelise umbuzo kanjani ukwakha iqembu esisemthethweni. Empeleni, ukuze zithandwe ngempela futhi wavakashela, kubalulekile ukuba sithole ababhalisile.
Okwamanje, kunezinhlobo inani elikhulu izindlela ongasebenzisa ukuthuthukisa umphakathi wakho. Kukhona zombili izinguqulo ikhokhwe futhi mahhala. Namuhla sanquma ukutshela abasebenzisi "Ngo Imininingwane", indlela agxumeke. Phela, le nkinga okwamanje nezokusigcoba kakhulu.
Le nkulumo ibhekisela ngendlela lokuthumela imilayezo siqu ukuba abakhona yabo, abangane. Yiqiniso, incwadi yezindaba ukuze abantu abangaziwa, ngeke ukwazi ukudala ngokomzimba, njengoba kunjalo nje akunakwenzeka kulesi sikhathi samanje, kodwa nganoma yisiphi isikhathi ungakwazi oda ikhokhwe ukukhangisa yokuxhumana. Ngoba umuntu isevisi enjalo ingase ibe ebiza kakhulu, futhi kwabanye, akudingekile, uma umqondisi ufuna ukusebenzisa amandla abo futhi amakhono. Phela, lo imiyalezo eyimfihlo ungathumela iziphakamiso ehlukahlukene. Ngokwesibonelo, uma iqembu lakho udayisa imikhiqizo ke ungakwazi wazise indlela kwezimo ezinhle noma ukukhushulwa, imincintiswano nokunye. "Ngo Imininingwane" - yokuxhumana ukuthi uyakwazi ukuletha traffic okuhle, kodwa edonsela nemali eyengeziwe.
Ake idili lokuqala ne ukumaketha, ngakho njengoba umsebenzi wokusabalalisa, kanye basabela kanjani futhi basabela abasebenzisi. Uma umlayezo ufika kusukela umsebenzisi ongaziwa, obhekisela ngegama, ngesikhathi esifanayo ke has isixhumanisi ziholela ngokuqondile yomsebenzisi, abanye abantu bavame kumangala, kodwa eziningi eside abasijwayele Ekutholeni ukukhangisa futhi ngaleyo ndlela eside iye yasiphendula abakuboni. "Ngo Imininingwane" - yokuxhumana, esikalini zazo, cishe engaziwa nakoyedwa, futhi, ngokufanelekile, ukukuthola akuyona nzima kwabanye, ngisho noma akuzona abangane bakho noma ababhalisile. Ngokwesibonelo, bangase bakuthole ifomu ekhethekile. Kunjalo abangane bakho mutual.
Uma udale iqembu lakho siqu, kakade usigcwalisa okuqukethwe okuhlukile bese ezithakazelisayo ocabanga kuyoba ezithakazelisayo hhayi kuwe kuphela kodwa nakwabanye, sekuyisikhathi ukuqala ukwenza Dispatch. Ngaphambi kokuthumela umyalezo, uzodinga ulungele. Ngakho, ngomusa wenze umklamo ezithakazelisayo futhi ekhangayo hhayi kuphela, kodwa futhi ukuze uqinisekise ukuthi yabhalwa kahle futhi ngaphandle emaphutsa esipelingi. kwemilayezo "contact" okufanele kwenzeke ngayo ngomoya ophansi futhi ngokunakekela. Uma une page lakho siqu ekhaya, kanti uMdali leqembu, kulesi simo, sincoma ukusetshenziswa yesibili, i-akhawunti ye-third-party ukusatshalaliswa izimemo, okuyinto ungathandi ngakho bayazesaba ukulahlekelwa. I-akhawunti entsha, ungakwazi ubhalise wena noma ukuthenga okwamanje kukhona inqwaba izitolo ukuthi sihlinzeke izinhlelo ezinjalo.
Ochwepheshe batusa ukuba uthumele umlayezo ukukhangisa nge isimemo iqembu bonke abasebenzisi ilandelana, kusukela uhlelo ezinjalo izaziso ayimpoqo kanye ubona ugaxekile, ngokufanele, kulezizimo ungakwazi ngokushesha okukhulu ulahlekelwe akhawunti yakho. Lokhu kuzokwenzeka ngisho uma kungukuthi bafaka izikhalo ezivela kubasebenzisi ubusuvele ukuthumela isimemo esinjalo. Uma ufisa ukuthola ukuthumela "contact" waya izinga okusezingeni eliphezulu ngempela futhi ngaphandle kwezinkinga, khona-ke nakanjani kudingeka ukwazi imithetho ekhethekile ukuthi sesingene, futhi uzokutshela.
Ngaphandle ukukhangisa iziqubulo
Uma ufunda ingxenye yokuqala lomlayezo futhi abasebenzisi ngenkuthalo 'contact', indlela agxumeke manje ukwazi. Nokho kumelwe kukhunjulwe ezicashile ezibaluleke kakhulu futhi imininingwane, lapho isenzo esinjalo is hhayi Kunconywa. Isihloko umyalezo, okuyinto ukuhlela eminye ukuthumela, ungalokothi ukubhala igama elithi "khulula", "isenzo" nokunye, njengoba izincwadi ezinjalo ithunyelwa ngokushesha kufolda "Ogaxekile" kanye nabasebenzisi zabo cishe musa ukufunda isuswe ezimweni eziningi. Uma wajama phambi lwempikiswano ebalulekile ehlobene yokuxhumana "VKontakte", "Indlela yokwenza newsletter", khumbula ukuthi kungcono elula kakhulu, into esemqoka - ukulungiselela kahle.
Uma ukwethula akhawunti ezengeziwe, akunandaba babhalisile wena noma uthenge kubo, kufanele ukuhlola imilayezo ehlukene ukukhangisa, futhi kuphela ke ngeke ukwazi ukuthola okufana elilungile kakhulu. Ngakho sanquma enye inkinga ngokuphathelene "VKontakte" yokuxhumana: indlela agxumeke. Zama amathiphu ethu futhi ungesabi ukuba ulinge.
Ifa Sex-ezixhunyiwe (incazelo)